TOOFTAA DADHABAME…ammoo Irratti dammaqame!!
Muuxannoorraa akkuma beeknutti, Wayyaaneen yoo haalli itti cimte mala qabdi. Mala kana keessaa ammaaf tokko qofan hima. Innis mala SOSSOBBII ti. Sossobaniiabidda ka’e dhaamsuu. Mala kaanaf ammo yeroo hedduu dhanga’oota Dh. D. U . O (OPDO) warra saba biratti jaallatamn jedhaman gargaaramti. Bifa walgahiitiin iddoo dubbiin jabaatetti ergitee hundaa tole! Jedhaanii jettiin. Isaanis dhaqanii walgahii walitti qabanii gaaffii sabaas harkaa funaananii hundumaa nideebisna jechuun waadaa galu. Bara darbe yeroo ijoollee 70 ol magaalaa AMboo keessatti dhabne tooftaa guddaa isaan gargaaraman Kabajamaa Mana maree Af’yaa'ii Obboo Abbaa Duulaa gara Ambootti ergan. Yeroo darbes Sabbataatti Obbo Lammaa Magarsaa erganiii saba harka walitti reebsisaa turan. Deebii inni kennettis uummanni gammadee sabboonaa keenya jechuun akka malee afarsee; afarsaas turre. Kun egaa gadda namootaa dagachiisuuf irraanfachiisuudha. Isa booda gaaffiinis hindeebine, duutiif ajjechaan, saamichi lafaas daranuu hammaate…anaan kan nadhibee:
1. Hamma yoomitti sabni kun gowwoomfamee afaan qabsiifamee dhiitamaa?
2. Lubbuu garraamota bade kanaaf eenyutu itti gaafatamaa?
3. Maaliif qaama barate gowwoomsuuf yaaliin taasifamaa?
4. 100% dhibbaan hawaasaan jaallatameen filatame jechuudhaan hanga yoomiitti aangoorra taa’amaa?
5. Biyya Xoophiyaatiif ooggansi haqaafi sabaaf hojetee darbu kan akka Nelson Mandela’faa yoom ka’aa?
Murtee ta’uu qabu:
1. Adaraa keessan walgahii waan jedhamu mara itti hin hirmaatiinaa…
2. Yoo teessan ammo waadaan siniif galamu marti sobaafi, qabsoo finiine qabbaneessuuf qofa kan ta’udha,
3. Qaamni OPDO jedhamu kun biyya sana keessatti aangoo murteessuufi abbaa biyyummaa falmachuudhaaf ga’umsa kan hinqabne ta’uu Oromoon marti beekuu qaba (Silaa muummicha ministeraa ta’uun biyyicha hin oogganan turee??)
4. Kan baasu tokkoof tokkicha qofa…isammoo Oromoon hundumtuu waan irratti dammaqe fakkaata.
1. Maaluma isiniif godha isinumti qabsooftanii Tigiree ofirraa ariitanii abbaa biyyaa taatanii? Gaafa ilaallu nu caalaa isintu gubateem...
2. Isinoo hojjettanii Wayyaanee biraa galata hinarganne, Oromoof dhaabattanii saba Oromoo biraa galata seenaa hin arganne...maaloo kan akka keessan salphate jiraay'ii?
3. Hamma yoomiitti garbummaa wayyaanee jala teessanii waan isheen godhi jette qofa hojiitti jijjiiruun kunoo tarsiimoo jallinaatiin saba ficcisiiftuu?..Utuu waa'ee Master Pilaanii isin dura dhaabbatniittu ta'ee Wayyaaneen humna maal qabdi?..
4. Maaloo waan hojjechuu hindandeenye sabaaf waadaa hinseeniinaa!, maaliif yeroo filannoon ga'u kuntaala miliyoonaan waadaa seentanii, fal'aana tokkitti hojiirra oolchuu dadhabduu?
5. Maqaamoo garaaf du'uu wayyaa?
Yaa Waaqa Oromoo lafa Oromoof biyya Oromootiif ati nama dhugaa kaasi!!
Beekan Gulummaa Irranaa-2015